Dubai Delight | International Tour & Package ngwugwu
Ozi site na MD Desk
Ụgbọ njem ụgbọ ala mgbazinye
Ụgbọ njem njem njem
Ọnụ Ahịa Tempo na Bhubaneswar
Odisha njem nchịkọta
Boobaneswar Puri 1 Night / 2 Days
Bhubaneswar Tour nchịkọta
Njem Puri pụrụ iche
BhitarkanikaOgige National Park nke Bhitarkanika bụ mba nke abụọ kachasị ukwuu na India. Sand Pebbles Bhitarkanika Tourism ga-eme ka ị nweta ọmarịcha ịma mma nke mmiri mmiri. Ala ahịhịa na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nnụnụ na-agafe agagharị na nduru, crocodiles ndị na-atụ egwu mmiri, mmiri mmiri na-eme ka mmiri dị jụụ, nke dị jụụ gburugburu nke nnụnụ na nke anụ ọkụkụ, na-adọta ndị ọbịa nke dị nso ma dị anya ịzụ ìgwè ndị a dị mkpa . Ndị ọkà mmụta sayensị, ndị ọkà mmụta, ndị na-ahụ maka ọdịdị na ndị njem na-enwe nri dị ukwuu maka echiche na nyocha. Bhitarkanika Tourism na-ekpuchi akụkụ nile nke njem. Ebe a na-anọchite anya otu n'ime ihe kachasị mma mgbe niile. Bhitarkanika bụ ebe obibi pụrụ iche nke Mangrove Forest nke jupụtara n'ọtụtụ mmiri na ọdọ mmiri dị na district Kendrapara nke Odisha. Otu n'ime ụlọ ọrụ nchịkwa nke Mangrove nke ukwuu na India, Bhitarkanika bụ ebe obibi dị iche iche na ugbo. Na Sand Pebbles Bhitarkanika Nlekọta njem ị nwere ike ịnweta njem ị na-achọ. Di iche iche di iche-iche di iche iche na-adọta ndi mmadu n'apata aka. Ngwurugwu National Park nke Bhitarkanika bụ ebe obibi nke anụ ọhịa Leopard, cat cat, cat ọhịa, hyena, boar ọhịa, anụ ọhịa, sambar, pigcupine, dolphin, crocodile saltwater gụnyere agụghị ọcha ọcha, eke, eze cobra, mmiri nlekota mmiri, terrapin, marine ugbo, ezefisher, woodpecker, hornbill, geese geese, Brahmani duck, pintail, ...
Similipal Bhitarkanika 4 Night / 5 Days
North East India Njem nchịkọta
Nchịkọta Njem Mba
Book Ugbu a
Dubai Delight - Dubai Tour package
Ụbọchị 04 / 05 Days
| Usoro njem: G-5020
Mgbe ị rutere n'Ọdụ Ụgbọelu International nke Dubai, a ga-akpọga gị na họtel gị site na onye nnọchiteanya anyị.
Nbanye na nkwari akụ ahụ, gbasie ike ma nọrọ ụbọchị ndị ọzọ n'ụbọchị ntụrụndụ.
Na-apụ isi na nkwari akụ ahụ na mgbede ma chọpụta ebe mposi. Ọ bụrụ na ịchọrọ ahụmahụ nke Emirati, gaa leta otu n'ime ọtụtụ souks Bur Dubai. Ebe dị nso bụ Bastakia Quarter akụkọ ihe mere eme bụ nke a ma ama maka ụlọ ndị nnabata ya na ụlọ elu ya.
Nri abalị na ụlọ oriri na ọṅụṅụ India
N'abalị na nkwari akụ.
Buru ngwa ngwa
Mgbe ị na-eri nri ụtụtụ, ị ga-amalite na njem ọkara nke obodo ahụ. Njem ahụ na-ewega gị na Bur Dubai Creek, ahịa ahịa Spice. Ị nwere ike ịkwụsị maka foto-Kwụsị na Burj al-Arab, naanị ụwa 7 kpakpando ụwa. Site ebe a ị gakwuru nwoke ahụ mere Palm Island na okpueze ya, Atlantis Palm Palm. Ihe dị elu nke njegharị ahụ bụ n'ezie ụlọ alakụba Jumeirah. Biko mara na ị kwesịghị iyi uwe ojii, azụ na ogwe aka kwesịrị kpuchie ma ndị inyom kwesịrị ikpuchi isi ha na headcarf. Na njem a, ị ga-eleta ụlọ ochie ndị Arabia na ejiji omenala ha.
Na mgbede, ị ga-aga maka ụgbọ mmiri dị na Dubai Creek. Dhows bụ omenala ụgbọ mmiri Arabic ndị na-agbanwebeghị kemgbe ọtụtụ narị afọ. Ụgbọ mmiri ahụ dị iche iche nke Dubai. Otu akụkụ bụ Deira, nke bụ, maka nzube niile, obodo Dubai dum ruo 1990. N'akụkụ nke ọzọ bụ Dubai ugbu a na okporo ụzọ ya na ultra-tall skyscrapers. Nri abalị (nri nkuru n'onwe) ga-abanye na ya.
Nwee nri ụtụtụ obi ụtọ ị nwere ike izuike n'ụlọ nkwari akụ gị ka ị na-enwe ụtụtụ na ntụrụndụ.
N'ehihie, ị na-amalite gị Desert Safari. A na-eburu gị gaa n'ọzara. Nọdụ ala ma nwee obi ụtọ otú ụgbọ ala ndị ahụ na-arịgo dunes na-enweghị ike. Ọ bụrụ na ị chọrọ! Leba anya na anyanwu na-agbada site n'elu igwe kachasi elu. Mmiri ụda olulu na-emekwa ka ebe nchekwa zuru oke maka ọtụtụ foto ndị ezinụlọ na-echefu echefu. Ọ bụrụ na ụgbọala ahụ na-adọrọ adọrọ yiri ka ọ dị n'oge a, burugharị kamel. Ị nwekwara ike ịbanye n'otu ebe nke henna na sheesha. A ga-eji nri abalị na-eme nri nri n'okpuru mbara igwe Arabian kpakpando mgbe onye na-agba egwú na-eme ka ị nwee obi ụtọ. Ka mgbede mara mma na-abịa ná njedebe, a na-ebughachi gị na họtel gị
Taa, mgbe e risịrị nri ụtụtụ, ị na-eji oge ezumike.
Otú ọ dị, anyị na-atụ aro ka ị were ohere a gaa leta Burj Khalifa, ụlọ kachasị elu n'ụwa. Kpọọ na ọ dị oke mma ma ọ bụ na-enweghị isi, ọ dịghị ihe ọ bụla na-egosi na Burj Khalifa bụ ihe na-eme ka ọkpụkpụ na nke nkà na ụzụ. Ụlọ elu kachasị elu nke ụwa na-agbago na mbara igwe na 828m (okpukpu asaa nke Big Ben) ma mepee na 4 January 2010, nanị afọ isii ka nchara ihe ndị ahụ malitere. Ruo ndị ọrụ 13,000 na-arụ ọrụ ehihie na abalị, mgbe ụfọdụ ha na-etinye ntọala ọhụrụ n'ime obere ụbọchị atọ. Ihe kachasị mma bụ Deck Observation 'Na Top' na 124th n'ala. Site na ebe dị elu dị elu, ị nwere ike ịchọta ụwa. Ịga ebe ahụ na-eme ka ị gafee multimedia dị iche iche na-egosipụta nwelite elu abụọ na-agba gị 10m kwa nkeji maka oge zuru ezu iji ruo 124 dị elu na 442m dị elu na mbara igwe. N'ọgwụgwụ njem, laghachi na họtel gị
Mgbe nri ụtụtụ, chọpụta na nkwari akụ ahụ. A ga-ebuga gị n'ọdụ ụgbọ elu ịbanye n'ụgbọelu gị.
Weghachite ụgbọelu okuku na Indigo
4 ehihie / 05 ụbọchị obibi
Nri ụtụtụ kwa ụbọchị na nri abalị
Umu Visa na ebubo e tinyere
Mee ka ị banye ebubo
Weghachite ntụgharị ụgbọ elu na SIC (oche na onye nlekọta)
Gị Email * Ozi gị
Usoro na ọnọdụ Ntube Nchekwa Mbanye Iwu blog nleba Kpọtụrụ anyị Sitemap
Akpụkpọ ụkwụ ájá ájá © 2019. Ikike niile echekwabara
blog nleba Kpọtụrụ
okwu Ntube Nchekwa Mbanye Iwu Sitemap
BỤTA AGBA AKA
Tinye nkọwa gị n'okpuru ebe a iji rịọ maka oku wee laghachi azụ ozugbo.
aha * ekwentị *